शास्त्रअनुसार भविष्यमा धनि बन्ने व्यक्तिमा देखिन्छन् यस्ता लक्षण, जीवनमा हुन्छ लक्ष्मीको प्रवेश ! – Krazy NepaL
December 1, 2021 97
हाम्रो जीवनमा लक्ष्मीले कहिले कति बेला कृपा गर्नुहुन्छ, भन्ने बारे हामीलाई थाहा हुदैन। त्यस्तै हामिले जे गर्दा पनि गर्न आटेको कार्यमा सफलता नमिल्ने कारणले निरासा र तनावको सामना गर्नु पर्ने पनि हुन्छ ।
हिन्दु शास्त्रकामा यस्ता पाँच सकेंतहरु छन् जसले तपाइको जीवनमा लक्ष्मीको प्रवेश सँगै भाग्य चम्किंदै छ भन्ने कुराको सकेंत गर्दछ । तपाइँले आफ्नो भाग्य चम्कीन लागेको सकेंत थाहा कसरी थाहा पाउन जानिराख्नुस यस्ता छन् सकेंतहरु ।
१.यदि हजुरले सपनामा हरियाली, पानि र लक्ष्मीको वाहान उल्लु देख्नुभयो भने सम्झिनुस तपाइको भाग्य चम्किंदै छ ।
२.अकास्मत तपाइको घर अफिसमा उल्लु आउँछ भने तपाईलाई चाडै नै धन लाभ हुदैछ, भन्ने संकेत हो ।
३.तपाईले सपनामा पहेलो सुनजस्तै सर्प तथा सेतो सर्प देख्नु हुन्छ भने भुझ्नुस तपाईको छिट्टै धनि बन्ने योग रहेको छ ।
४.धनकी देवी लक्ष्मीको पूजा शुक्रवारको दिन गरीन्छ, यदि हजुरलाई त्यस दिन कुनै केटिले सिक्का दिइन् भने तपाईले चाडै नै प्राप्त गर्नु हुनेछ ।
५. धर्म शास्त्रका अनुसार धन र सर्पको बीच नजिकको सम्बन्ध हुने बताएको छ। यदि हजुरले आफ्नो घरको वरपर कतै सेतो रंगको सर्प देखीयो त्यहाँ आसपासमा केही विशेष खालको खजाना हुनसक्ने सम्भावना हुने शास्त्रमा उल्लेख छ।
Nextम दुईवटा श्रीमान राख्न चाहान्छु, के मान्छ त यो समाजले ?